နေအိမ် » စွန့်စားမှုအားကစားပြိုင်ပွဲ » Trolls 3D Maze Adventure Game
ဂိမ်းသတင်းအချက်အလက်များ: Trolls 3D Maze Adventure Game
ထိန်းချုပ်ရေး: Use arrow key to move. Trolls 3D Maze Adventure Game
ကစား: 26,373 tag ကို: trolls, trolls games, maze games, Adventures ဂိမ်း, trolls 2016, film games
winx ကလပ်: သင်၏အတောင်ပံထွန်းလင်းပါစေ
ယခုအားလုံးအသစ်က Winx ဂိမ်း Play နှင့်သင့်အတောင်ပံထွန်းလင်းပါစေ!
ဗြိတိသျှတော်ဝင်တပ်မတော်သိပ္ပံပညာရှင်များဟာဆက်သွယ်မှုလေ့လာရေးစူပါစစ်သား၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏စီမံကိန်းဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သူတို့၏စိတ်ကူးအကောင်အထည်ဖော်။ ဤရွေ့ကားစစ်သားတွေအများကြီးပိုအစွမ်းထက်နှင့် Hardy သာမန်လူထက်ဖြစ်ကြသည်။ အနမူနာတ battlefi ထံသို့စေလွှတ်ပြီ
အမွှာ elf ညီအစ်ကိုတွေရဲ့အဖြေတစ်စုံကို Magic Kingdom.They တွင်နေထိုင်ကြသည်, ထိုမှော်နိုငျငံတျော၏ရှင်ဘုရင်ရုတ်တရက်ထူးဆန်းတဲ့ disease.All ဆရာဝန်များကဒီထူးဆန်းတဲ့ disease.At ဤအချိန်မျြးသာမပေးနိုင်တယ်မှော် abilities.The အမျိုးမျိုးနှင့်အတူမွေးဖွားလာကြ သူတို့တစ်တွေကြားသိ
မီးလောင် elves သရုပ်ပြ
ပြည်မထဲမှာဖန်ဆင်းခြင်း၏အဘ, Angelis ဒီကမ္ဘာ့သြဇာအရှိဆုံးမှော်တန်ခိုးတော်ဖြစ်၏, မှော်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်အရင်းအမြစ်ကိုစှနျ့နှင့်ဟောကိန်းထုတ်မီး elf မိန်းကလေးနှင့်အတူသဘာဝစွမ်းရည်နှင့်ပြည့်စုံမှော်မစ်ရှင်၏အရင်းအမြစ်ကာကွယ်ပေးရန် - မီးလောင်။ အဆိုပါ
dastardly ညစ်ပတ်ပေရေရယူထားသော SpongeBob
မကောင်းသောအလှည့်ကွက်-သို့မဟုတ်-အားရစရာနဂါး vs ဒီဂိမ်း SpongeBob ။ သူ့ကျန်းမာရေးကိုလျှော့ချသင်မူကားမိမိအအနီရောင်သကြားလုံးအားဖြင့်ဝင်တိုက်ရကြပါဘူးသေချာအောင်နိုင်ရန်အတွက်သူ့ကိုမှာအချို့သောစိမ်းလန်းသောသကြားလုံးပစ်။
ဒီစွန့်စားမှုခရီးစဉ်အတွက်, SpongeBob သစ်ဂူရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ အကူအညီ SpongeBob ကသူ့မစ်ရှင်လွန်အပေါင်းတို့နှင့်တကွနဂါးဖျက်ဆီးနှင့်။
SpongeBob သူ့ကိုသူ၏အပျံသင်တန်းပြီးသွားအပေါင်းတို့နှင့်စွမ်းအင်ပစ်ချ helicopter.Help နှင့်အတူပျံသန်းချစ်တော်မူ၏။
ပင်လယ်အောက်မှာ SpongeBob စွန့်စားမှု
Patrice မကြာမီကယ်တင်နိုင်ခဲ့ခံရဖို့လိုအပ်ပါတယ်, မိကျောင်းအားဖြင့်နက်ရှိုင်းသောပင်လယ်၌ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ SpongeBob ကိုပင်လယ်နဂါးမှပက်ထရစ်ကယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သငျသညျမိမိအ Patrice ကယ်တင်ရန် SpongeBob ပြီးပြည့်စုံစွန့်စားမှုကူညီပေးနိုင်သည်။
Bob ရဲ့လမ်း: ငရဲမှလွတ်
ဘော့လမ်း: ငရဲမှ Escape action ကိုအရေးအပါဆုံးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုမကဘယ်မှာနေတဲ့ပလက်ဖောင်းဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဘော့ကောင်းတစ်ဦးမာရ်နတ်ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူတစ်ဦးနှောင့်အယှက်အလုပ်ရှိတယ်။ သူကမုန်း, မိမိအကြီးအကဲကိုမုန်း၏။ ဒါကြောင့်ဘယ်နေရာမှာသူသွားနိုင်သလဲ ဘော့မှ ... ကောင်းကင်ခရီးစတင်ပါလိမ့်မယ်! y ကိုလုပ်ပါ
SpongeBob နှင့်အတူအဆငျ့ 14 ကျော်အားဖြင့်ဒီဂိမ်းထဲမှာသမုဒ္ဒရာ၏စိတ်လှုပ်ရှားစရာနှင့်အန္တရာယ်ရှိရှာဖွေတွေ့ရှိ။ SpongeBob အားလုံးကို item တစ်ခု get ရမှတ်များစုဆောင်းကိုကူညီပါ။
စစ်ပွဲလူသားထုအဆုံးသတ်ရေးတတ်၏ရှေ့တော်၌ထိုစစ်ပွဲကိုအဆုံးသတ်မှလူသားတို့အတှကျသူ့ရဲ့အချိန်။ Chaos ၏လိဂ်တစ်ခုထိန်းချုပ်ရေးနှင့်တိုးတက်သောသူရဲကောင်းဇာတ်ကောင်နှင့်သိပ္ပံဝတ္ထုဆောင်ပုဒ်နှင့်အတူတစ် sideview မဟာဗျူဟာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
သူအတော်လေးအန္တရာယ်များနှင့်အတားအဆီးများစရာတွေတစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျချြောတစ်ပြပွဲအားဖြင့်ကစားလျှက်ပြီးစီးသောအခါအ in-ဂိမ်းလှုပ်ရှားမှုနှင့်စွန့်စားမှုတောင်တက်သမားချော်ရည်ဒီဆိသူ့ရည်းစားကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာသံသယဖြစ်ခဲ့သည်။ သငျသညျမိမိအမိန်းကလေးကိုရှာဖွေချင်တယ်ဆိုရင်ယခုသူ t ကိုသွားကြဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်
တဲ့ acorn အမဲလိုက်ခြင်း
ဒါဟာဆောင်းကာလကိုဖြစ်ပါတယ်, ဒါကြောင့်ဒီရှဉ့်လုံလောက် acorn ဆောင်းတွင်းကတဆင့်ရရငျတှေ့ရပါမည်။ သငျသညျအဖြစ်အများအပြား acorn ရှာတွေ့မှသူ့ကိုကူညီနိုင်မလား?
သူ့မြို့ယခုကြီးစိုးခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်လူဦးရေနှင့်အတူဖျက်ဆီး၏အားလုံးကြင်နာလုပ်နေကြသူအကြောက်မက်ဘွယ်သောလူရမ်းကားများကကျူးကျော်ခဲ့သည်။ ဃတစ်ဦးနင်ဂျာကဲ့သို့ဝတ်စားဆင်ယင်နှင့်ဤဓားပြများတဦးကိုသတ်, သင်မူကားမှောင်မိုက်အရိပ်သည်အပြုမူသောအခါမကောင်းတဲ့ယောက်ျားတွေဒဏ်ခတ်ရမယ်ဖြစ်သောကြောင့်သတိပြုရကြမည်
အဆိုပါဖောက်ပြန်သောသူငယ်ကိုယ်ပျောက်လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်သေစေတတ်သော Mutant လက်နက်ဖန်တီးခြင်းအပေါ်သတ်မှတ်မကောင်းသောအအင်ပါယာချယူခြင်းငှါနောက်သို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကြှနျုပျတို့ကမ်ဘာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်တစ်ဦးထူးဆန်းတဲ့ဖြစ်စဉ်နှင့် Intel ရှာဖွေတွေ့ရှိရှိရာပထမဦးဆုံးဂိမ်းထဲမှာပယ်ကျန်ရစ်ရှိရာအရပ်ယူပါ။ ဒီဂိမ်းမှာတော့အသစ်တွေ stea များ
Arnold Schwarzenegger သူအမှုအရာထမှုတ်နှင့်ချ GET လူတွေကိုပြောပြရန်အသုံးပြုသည့်အခါဟောလိဝုဒ်အတွက်ကောင်းသောရှေးကာလလောက် reminisces!4ပိတ်ပင်တားဆီးမှု buster ရုပ်ရှင်များတွင်ရန်သူလှိုင်းလုံးကိုရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားပါ, ကွန်မန်ဒို, ပရီဒိတ်တာ, စုစုပေါင်းသတိရပါနှင့်က Terminator ။
အသေစေနိုင်သောချြောပေါကျကှဲမီးတောင်လွတ်မြောက်ရန်ဖို့ပလက်ဖောင်းတက်ပြီးစဉ် ??, ရှိသမျှပူးတွဲကျွမ်းကျင်မှုကစားသမားဘာစီလိုနာ၏ဒေးဗစ်ဗီလာနှင့်အတူ Up ကို။ Salta နှင့်ထိပ်ယူပါ။
အဆိုပါသူရဲကောင်းအန္တရာယ်များရန်သူများကိုသဖြင့်စောင့်နေတဲ့ရဲတိုက်မှတဆင့်၎င်း၏လမ်းလုပ်ရပေမည်။ သူ၏အသာလက်နက်ကဓားနှင့်တစ်ဒိုင်းလွှားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအောက်မှာတတ်၏။ အားလုံးဖန်သားပြင်ဖြည့်စွက်။
ဒီမိန်းကလေးသူမ၏အတားအဆီးအ packages များစုဆောင်းစန်တာရအတိတ်ခုန်ချကိုကူညီပါ။ အခက်အခဲတိုးပွါးကြောင်းမျိုးစုံကိုအဆင့်ဆင့်ရှိပါတယ်ရာမိန်းကလေးများအဘို့ဤပျော်စရာကျွမ်းကျင်မှုဂိမ်းခံစားပါ။ မိန်းကလေးခုန်စေပါနှင့်သူမ၏ရှေ့ဆက်ရန်သင့်မြှား key တွေကိုသုံးစွဲဖို့ space bar ကိုထိမှန်
မော်ကွန်းစစ်တိုက်စိတ်ကူးယဉ် - စွန့်စားမှုပုံပြင်
ဇာတ်ကောင် level နှင့်အတူအကောင်းဆုံးရှာဖွေနေလှုပ်ရှားမှုပလက်ဖောင်း။ လက်နက်တွေ & မှော်တိုက်ခိုက်မှုများပါဝင်သည်။
သငျသညျအာကာသသို့စလှေတျပါလိမ့်မည်, ဒါပေမယ့်ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုခုကိုသင်အာကာသယာဉ်ဖယ်ရှားပစ်ရနှင့်သင်တို့၏အာကာသယာဉ်ကိုတွေ့မြင်ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းရှာရန်လိုအပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မကောင်းသောအမိကျောင်း, Spaceman ကံကောင်းပါစေရှိပါတယ်လမ်းဖြစ်ပျက်!
သင်တစ်ဦးအာကာသယာဉ်ဦးခေါင်းခွံပုံသဏ္ဍာန်မောင်းနှင်နေကြသည်ဆိုပါစို့။ ခရီးစဉ်အတွင်းသင်သည်များစွာသောထူးဆန်းတဲ့တ္ထုကြုံတွေ့ရနှင့်အခြားသောသင့်ရဲ့သင်္ဘော Dodge ကိုဖကျြဆီးနှင့်သူတို့အားလုံးကိုပစ်သတ်ချင်တယ်။
မြို့ဝိုင်းရံ 3: တောတွင်းဝိုင်းထားခြင်း
အဆိုပါ Baddies တောတွင်းကျော်ယူကြပြီ။ တစ်တပ်ကိုတညျဆောကျနဲ့သူတို့ရဲ့မကောင်းသောအဝဲဂယက်ကနေတောတွင်းလွတ်။
ဒီ spacemen အာကာသမှတဆင့်သူ၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်သွားရောက်ကာ။ မိမိအလမ်းတွင်သူအသစ်တစ်ခုဂြိုဟ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယခုသူတပြင်လုံးကိုဂြိုဟ်စစ်ဆေး့ပါပဲ။ ဒီဂြိုဟ်ပေါ်မှာမကောင်းသောအသတ္တဝါတွေထွက်သည် Watch ။
ဒီပျော်စရာစွန့်စားမှုခုနှစ်တွင်ရှင်ချန်းကွဲပြားခြားနားသောတိရိစ္ဆာန်များအသွင်ပြောင်းဖို့အာဏာကိုရှိပါတယ်။ ဒီပလက်ဖောင်းများ၏အဆင့်ဆင့်ရိုက်ပုတ်ကိုအသုံးပြုပါ။ ခုန်ဖို့တိုက်ခိုက်ဖို့နှင့် K ရန်, J ကိုရွှေ့ဖို့ Press မှအေဒီ။
ပွဲစဉ်3စွန့်စားမှု
ဂိမ်းအနိုင်ရ combo တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ရန်ကြိုးစား, သင်တို့၏သူရဲကောင်းနဂါးတိုက်ခိုက်ရန်အောင်မြန်သင်သည်တတ်နိုင်အဖြစ်ပွဲစဉ်3Play ။